Warqad ku Citizen Buubaa: Reaction Dousing in Koronto Pricing
Sida waraaqaha Qaybta Dawlada ayaa dhawaan qaadatay aragti weyn ee Nigeria, waxaa laga yaabaa in aanay ka soo baxa meeshan in dhallaanka habkani by ku daray anigaa - Wixii isticmaalka caadiga ah Nigerian ah. The macaamiisha korontada Nigerian waa meelahii loogu talo galay ee aan warqad furan, xasilan tahay Citizen Buubaa, oo waa hadda laga shakiyo (oo ay weheliyaan malaayiin uu nooca) of binta la dhacsanayn awoodda korontada ee waayihii post-gaar Nigeria ee.
Piece waxaa loogu talagalay dousing dareen-celin u badan tahay dhacsanayn agagaarka, iyo in ay soo saarto miisaanka weyn ka indho Citizen Buubaa ayaa.
Khasbanaaday in uu codsan horyaalka sharaxayaa baan ahay, "Citizen", magacaaga sabab u ah xaqiijinta in aad ka filanaysid waxa ku dhacaya binta ama heerka korontada waa laga fekerayo daahir ah kuwa la aannaan by malaayiin macaamiisha kale korontada ee Nigeria. In si kale loo dhigo, aad summad ah muwaadin Nigerian caadiga ah, isagoo sunnayaashiisa sare u sheekaynaya hor maraan oo cad ee waxa dhacaya ku saabsan heerka la doonayo in la bixiyo ee korontada, hadda in waxqabad gaar ahaan loo maamulo ayaa la wareegay hantida jiilka iyo qaybinta korontada, sabab u gaar ah ee dhowaan soo gabagabeeyey waaxda tamarta oo ay.
Ma aha ka soo baxa meeshan inay filayaan qafilan tahay dadweynaha inay wax u kordhay rasmiga ah ee heerka korontada si ay macaamiisha. Tani waa sababta warqadan adiga kugu wajahnayn, sida macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan socodkiisa oo-ku hubaal ka dhigi doonaa fahamka dadweynaha, oo markii dambe douse falcelin dadweynaha wax la dhacsanayn. Ahaanta isticmaalaha Nigerian naftayda, Waxaan arrin xusuusnaan su'aalo badan tahay qaabka qaadashada in aad maskaxda ku ahay inta aad ku dhex this warqadihiisa.
Mid ka mid ma aha inuu ahaado clairvoyant si aad u ogaato in aad qabto wax su'aalo ah, kuwaas oo ku haysaa: (a) Natiijada dhawaan gabagabeeyay gaar heerka korodhka? (b) Haddii ay haa tahay, waa maxay fikrada ah ee sida? (c) Maxaa la samayn karaa ku saabsan raad busho on ratepayers, haddii kororka sicir dhacaan? Ka hor inta qabashada su'aalahan, Waxaan jeclahay in aan farta waxa macaamiisha Nigeria ayaa haatan ka cabanayso (Halkan ka tilmaan mid ka mid ah kororka qiimaha keenaya revulsion), iyada oo qaarkood qaarka badan oo iftiin ku saabsan waxa hadda hesha marka la eego waxa ay taasi si cusub oo heysta noo, macaamiisha.
Beetle, Waxaan rajaynayaa in aad ogaataa in ay tahay wax dhib badan xoogaa weydiinayeen dadka si ay ugu bixiyaan waxyaabaha waxaa hoos-bixisey, sida koronto hadda waa? Waa news dheer ku jirin in inta badan qoysaska Nigeria iyo goobaha ganacsi ayaa la waayi korontada. Macaamiisha ayaa caadiga Nigeria ee suuqa koronto, sida kuwa ku qamaama kale, waxay leedahay laba walaac aasaasiga ah oo aad u aasaasi ah, oo waxaa la siiyey si of mudnaanta – Security of siin, iyo qiimaha. Waxaan wajahnay halkan Sadaqo, sida magaciisu hore ee taxanahan waxa uu ka hadlay arrinta ku siin halka expatiating tayada awooda network qaybinta.
Ka hor inta aanad dhexgalin waxa ugu horeerey oo qayb ka ah amarka cusub, fadlan ha u qaban iga gees ah haddii aan ka riix si aad u xasuusato in, "Su'aasha kasta, ma jirto jawaab dusha iyo mid qoto dheer ". Jawaabta qoto dheer si aad su'aal ku saabsan binta waa wixii dhab ahaan ka dhigan heerarka kuwa ama eedeeyay in muuqan in aad biilasha korontada bil kasta. Beetle, Tan ma iloobin – Biilkaaga bisha (taas oo biil u isticmaalka tamarta korontada ama korontada) ka kooban yahay laba qaybood:
(a) Kharashka aad (la'aan tamarta badanaa tagged) oo ku salaysan tamarta korontada (in-waat saacaddii ama kWh) baabbi'iyey guriga ama ganacsi muddada bisha. Waxaa ka mid ah lacag la xidhiidha wax soo saarka korontada (abuurid korontada); la'aan ee ka hawlgala iyo dayactirka nidaamka gudbinta korontada (qabadsiinta iyada oo ku xirneeyn qeybiyaha); lacag dhaqaaqin korontada ka badan khadadka qaybinta gurigaaga ama ganacsiga (waxa qaybinta ee aaggaaga); iyo habka maamulka iibka (kharashaad ku lug leh maamulka in ay iibiyaan si aad u).
(b) A levy koronto yar (inta badan loo la'aan bil kasta sida go'an, kharash adeeg ama lacagta adeegga). Tani waxay qayb ahaan wax ka qabtaan biilasha, reading meter, heeganka jawaab, dayactirka line adeeg iyo qalab rakibaadda cusub.
Citizen Buubaa, ogow in ay jirto xaalad halkaas oo aad go'aansato in aadan xitaa Cunina kWh gurigaaga ama goobta ganacsiga inta lagu jiro bisha, (a) kor ku akhriya eber, halka (b), qarashka hawl-bil in, sida beeshiisa si aad category ee macaamiisha, weli dallici lagaa xiro. Nigeria waa in had iyo jeer ku haay maanka in fikradda ah Service Charge in habka biilasha yahay ma lagu dabaqi karo halkan oo keliya (ma ah wax Nigeria '), laakiin hesha in qaybaha kale ee adduunka ka. Fadlan si xor ah u this xaqiijiyo. Aadida by our weeraha maxalliga ah, kharash adeeg waa "banker hubo".
On in si gaar ahna waaxda tamarta oo uu keeno kor u heerka kasta ama haddii kale, jawaabtu tahay 'haa'. Waxaa sameeyey, laakiin waxay heerkeedu. Gaar wuxuu ku baaqay in hordhaca ah ee taliskii binta a tagged Multi Year canshuur Order (TALEEFOONKA), geliyaa meeshii ay Nigerian Korontada Regulatory Commission ama NERC. Waxaa loogu talagalay inay ku dhaliyay go'aan ka mid ah kharashka korontada iibiyo qaybinta (iyo tafaariiqda) shirkadaha ka June 1, 2012 si May 31, 2017. In si kooban u dhigo, aan MYTO maal-siin lahaa booska balaadhan oo si maalgashiga waaxdan, iyo jimicsiga si gaar ahna ay noqon lahaayeen kuwa flop ah, kabashada kharashka sida binta hooseeyo lahaa ma-xaar u maal-. Wixii dheeraad ah oo ku, Beetle, Waxaan idinka baryayaa inaad booqato web site NERC ee. (Si aad u la sii wadi)
1 Comment on "Warqad ku Citizen Buubaa: Reaction Dousing in Koronto Pricing"
daacad ah, badan oo loo baahan yahay in la sameeyo ku saabsan korontada ee Nigeria. waxaan qorshaynaynaa in aan ka mid ah hogaanka noqday 20 dhaqaalaha adduunka iyo maanta iyo da ', in waa in si xaqiiqo ah in la gaaro oo la kaabayaasha awood fiican. i kalsoon tahay dowladdu waxay wadi doontaa in ay fuliso siyaasadaha wanaagsan oo loo hubiyo in ay si waxtar leh waxaa laga dalbadaa